Nkwa ne Mogya yɛ Onyankopɔn Akyɛde, Ntoto no Ase
KENKAN WƆ Abbey Abui Acholi Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Betsimisaraka (Southern) Bislama Bolivian Sign Language Boulou Bété Cambodian Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chopi Chuabo Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Cuban Sign Language Damara Dangme Danish Douala Drehu Dusun Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Fijian Fon French Futuna (East) Ga Gitonga Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibinda Igbo Indian Sign Language Indonesian Irish Italian Italian Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Mazahua Mbunda Meru Moore Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Otetela Pidgin (Cameroon) Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Sidama Silozi Sinhala Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Wolaita Yacouba Zande Zulu
1. Hena na ɔmaa yɛn nkwa?
YEHOWA yɛ “Onyankopɔn teasefo.” (Yeremia 10:10) Ɔno na ɔbɔɔ yɛn, na ɔno na ɔmaa yɛn nkwa. Bible se: “Wo na wobɔɔ nneɛma nyinaa, na wo pɛ nti na ɛwowɔ hɔ na wobɔe.” (Adiyisɛm 4:11) Ɛyɛ Yehowa pɛ nti na yɛte nkwa mu. Nkwa yɛ akyɛde a ɛsom bo paa a ɔde ama yɛn.—Kenkan Dwom 36:9.
2. Sɛ ebesi yɛn yiye a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
2 Yehowa ama yɛn biribiara a yehia na ama yɛatumi atena nkwa mu. Ebi ne aduan ne nsu. (Asomafo Nnwuma 17:28) Ne nyinaa nka mfua; ɔpɛ sɛ yɛn ani gye. (Asomafo Nnwuma 14:15-17) Nanso sɛ ebesi yɛn yiye a, gye sɛ yedi Onyankopɔn mmara so.—Yesaia 48:17, 18.
SƐNEA ONYANKOPƆN BU NKWA
3. Bere a Kain kum Habel no, dɛn na Yehowa yɛe?
3 Bible ma yehu sɛ obiara nkwa som bo ma Yehowa. Enti bere a Adam ne Hawa ba Kain bo fuw ne nua Habel no, Yehowa bɔɔ no kɔkɔ sɛ ɔnka n’abufuw nhyɛ. Nanso Kain antie; mmom ɔmaa ne bo fuwii araa ma ɔtow “hyɛɛ ne nua Habel so kum no.” (Genesis 4:3-8) Yehowa twee Kain aso. (Genesis 4:9-11) Wei ma yehu sɛ abufuw ne ɔtan nye, efisɛ ebetumi ama yɛayɛ basabasa anaa yɛadi awu mpo. Obi yɛ saa nneɛma yi nso a, ɔrennya daa nkwa. (Kenkan 1 Yohane 3:15.) Sɛ Yehowa ani begye yɛn ho a, gye sɛ yɛdɔ nnipa nyinaa.—1 Yohane 3:11, 12.
4. Mmara a Onyankopɔn de maa Israelfo no mu baako ka dɛn fa nkwa ho?
4 Kain ne Habel asɛm no sii no, mfe mpempem akyi na Yehowa de Mmara Nsɛm Du no maa Mose, na emu nsɛm ma yehu sɛ nkwa som bo ma Yehowa. Mmara no baako ne sɛ: “Nni awu.” (Deuteronomium 5:17) Ɛsan kae sɛ, obi boapa di awu a, wonkum no bi.
5. Onyankopɔn bu nyinsɛn a wotu gu sɛn?
5 Nyinsɛn a wotu gu nso ɛ? Onyankopɔn bu no sɛn? Abofra a ɔhyɛ yafunu mu mpo, ne nkwa som bo ma Yehowa. Yehowa kae wɔ Mmara a ɔde maa Israelfo no mu sɛ, sɛ obi pem ɔbea a ɔyem ma abofra no wu a, wonkum saa nipa no. (Kenkan Exodus 21:22, 23; Dwom 127:3.) Wei ma yɛte ase sɛ nyinsɛn a wotu gu yɛ bɔne.—Hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 28.
6, 7. Dɛn na yɛyɛ a ɛbɛma Yehowa ahu sɛ yebu nkwa?
6 Yɛbɛyɛ dɛn ama Yehowa ahu sɛ yebu yɛn nkwa ne afoforo de sɛ ɛsom bo? Ebi ne sɛ yɛrenyɛ biribiara a ɛbɛma yɛde yɛne afoforo nkwa ato asiane mu. Wei nti, yɛrennom wii, tawa anaa nnubɔne biara, efisɛ ebetumi apira yɛn anaa akum yɛn.
7 Onyankopɔn na ɔde yɛn nkwa ne yɛn nipadua adom yɛn, enti yɛrentumi mfa nyɛ nea yɛpɛ. Mmom, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ so yiye. Anyɛ saa a yɛn ho begu fi Onyankopɔn anim. (Romafo 6:19; 12:1; 2 Korintofo 7:1) Nkwa som bo paa, na sɛ yɛanhu no saa a, yɛrentumi nsom Yehowa a ɔde maa yɛn no. Suban bɔne bi wɔ hɔ a epira yɛn nanso ne gyae nna fam. Sɛ yebu nkwa na ɛno nti yɛyere yɛn ho sɛ yebegyae a, Yehowa nso bɛboa yɛn.
8. Dɛn na yɛbɛyɛ na yɛamfa yɛne afoforo nkwa anto asiane mu?
8 Yɛabehu sɛ nkwa yɛ akyɛde a ɛsom bo paa. Yehowa gye yɛn di, na onim sɛ yɛremfa yɛne afoforo nkwa nni agorɔ da. Enti sɛ yebu nkwa na yɛreka kar, moto anaa afiri afoforo biara a, yɛbɛhwɛ yiye. Agodi biara a ɛyɛ hu ne biribiara a ebetumi atwa yɛn nkwa so no, ɛsɛ sɛ yɛtwe yɛn ho fi ho. (Dwom 11:5) Afei nso, yɛbɛhwɛ atoto nneɛma yiye wɔ yɛn fie na asiane biara anto obi wɔ hɔ. Yehowa ka kyerɛɛ Israelfo sɛ: “Sɛ wusi fie foforo a, gye ban wɔ ɔdan no atifi na obi amfi hɔ anhwe ase, na wo fie anni mogya ho fɔ.”—Deuteronomium 22:8.
9. Sɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ mmoa?
9 Sɛnea yɛne mmoa te mpo, Yehowa hwɛ. Yehowa ama yɛn kwan sɛ yebetumi akum mmoa adi anaa yɛde ayɛ atade. Afei nso, sɛ aboa bi tow hyɛ yɛn so a, yebetumi akum no. (Genesis 3:21; 9:3; Exodus 21:28) Nanso ɛnsɛ sɛ yɛyɛ mmoa ayayade anaa yekum wɔn de gyigye yɛn ani kɛkɛ.—Mmebusɛm 12:10.
NKWA SOM BO
Yɛrenkum abofra a ɔhyɛ yafunu mu
Yɛrentan yɛn yɔnko nnipa
Yɛrennom wii, tawa anaa nnubɔne biara
BU NKWA SƐ ADE KRONKRON
10. Yɛyɛ dɛn hu sɛ mogya yɛ nkwa?
10 Yehowa bu mogya sɛ ade kronkron, efisɛ yɛka nkwa a, ɛno ara ne mogya. Bere a Kain kum Habel no, Yehowa ka kyerɛɛ Kain sɛ: “Wo nua no mogya fi asase so reteɛm frɛ me.” (Genesis 4:10) Habel mogya a Yehowa kaa ho asɛm no gyina hɔ ma ne nkwa, enti bere a Kain kum no no, Yehowa twee Kain aso. Afei Noa Nsuyiri no akyi no, Yehowa san maa emu daa hɔ sɛ mogya gyina hɔ ma nnipa nkwa. Ɔmaa Noa ne n’abusua kwan sɛ wonkum mmoa nni. Ɔkae sɛ: “Mmoa a wɔte ase nyinaa nyɛ aduan mma mo. Mede ne nyinaa ama mo sɛnea mede nhaban momono maa mo no.” Nanso Yehowa baraa wɔn ade baako. Ɔkae sɛ: “Ɔhonam ne ne kra, kyerɛ sɛ, ne mogya, nkutoo na munnni.”—Genesis 1:29; 9:3, 4.
11. Mogya ho mmara bɛn na Onyankopɔn de maa ne man Israel?
11 Bere a Yehowa de mogya ho mmara maa Noa no, bɛyɛ mfe 800 akyi na ɔsan de ahyɛde maa ne nkurɔfo sɛ: “Sɛ Israelni anaa ɔhɔho a wabɛsoɛ mo biara yɛ ha na onya aboa anaa anomaa bi a ɔpɛ sɛ odi a, onhwie ne mogya ngu mfa dɔte nkata so.” Afei ɔkae sɛ: “Munnni ɔhonam biara mogya.” (Leviticus 17:13, 14) Saa bere no nyinaa, na mogya ho mmara no nsesae; na Yehowa pɛ sɛ ne nkurɔfo bu mogya sɛ ade kronkron. Na wotumi di aboa nam, nanso ne mogya deɛ na ɛnsɛ sɛ wodi. Enti sɛ wokum aboa a, ɛsɛ sɛ wohwie ne mogya gu fam ansa na wɔadi ne nam.
12. Kristofo bu mogya sɛn?
12 Yesu ba kɔe no, asomafo no ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem asafo no mu yɛɛ nhyiam bi. Na wɔpɛ sɛ wohu sɛ Mmara a Yehowa de maa Israelfo no, emu nea ɛwɔ he na ɛsɛ sɛ Kristofo di so. (Kenkan Asomafo Nnwuma 15:28, 29; 21:25.) Yehowa boaa wɔn ma wohui sɛ ɔda so ara bu mogya sɛ ɛsom bo, na wɔn nso ɛsɛ sɛ wobu no kronkron. Enti tete no, na Kristofo nni mogya anaa wɔnnom. Afei nso, na ɛnsɛ sɛ wɔwe aboa a wɔanhwie ne mogya angu nam. Sɛ obi yɛ saa a, ɛte sɛ nea wasom bosom anaa wabɔ aguaman pɛpɛɛpɛ. Efi saa bere no, nokware Kristofo anni mogya. Ɛnnɛ nso ɛ? Biribiara nsesae; Yehowa pɛ sɛ yebu mogya sɛ ade kronkron.
13. Adɛn nti na Kristofo nnye mogya?
13 Enti sɛ Kristoni bi yare a, ɛnsɛ sɛ ogye mogya anaa? Yiw. Yehowa ahyɛ mmara sɛ mma yennni mogya. Sɛ dɔkota tua wo nsa a, wode bɛfa wo ntini mu akɔ wo nipadua mu? Dabida! Enti sɛ Onyankopɔn ka sɛ mma yennni mogya a, nea ɛkyerɛ ne sɛ ɛnsɛ sɛ yegye mogya.—Hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 29.
14, 15. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ Kristofo bu nkwa na wotie Yehowa?
14 Sɛ dɔkota ka sɛ woannye mogya a wobewu a, dɛn na wobɛyɛ? Onyankopɔn deɛ, wahyɛ ne mmara. Obiara besi ne gyinae sɛ obedi so anaa onni so. Nea ɛwom ne sɛ, Kristofo bu nkwa sɛ akyɛde a efi Onyankopɔn hɔ, enti ɛmfa ho sɛ yennye mogya no, yɛhwehwɛ ayaresa a ɛbɛma yɛn ho atɔ yɛn.
15 Yɛyɛ nea yebetumi biara sɛ yebenya apɔw-mu-den, nanso esiane sɛ Onyankopɔn bu nkwa sɛ ɛsom bo nti yennye mogya. Ɛho hia paa sɛ yetie Yehowa mmom sen sɛ yɛbɛyɛ ne so asoɔden de apere yɛn nkwa. Yesu kae sɛ: “Obiara a ɔpɛ sɛ ogye ne kra nkwa no bɛhwere; nanso obiara a me nti ɔbɛhwere ne kra no nsa bɛka.” (Mateo 16:25) Yɛpɛ sɛ yetie Yehowa efisɛ yɛdɔ no. Ɔno na onim nea eye ma yɛn. Afei, sɛnea Yehowa bu nkwa sɛ ɛsom bo na ɛyɛ kronkron no, saa ara na yɛn nso yebu no.—Hebrifo 11:6.
16. Adɛn nti na Onyankopɔn asomfo di ne mmara so?
16 Onyankopɔn asomfo a wodi no nokware no deɛ, wɔasi wɔn bo sɛ mogya ho mmara a Onyankopɔn de ama wɔn no, wobedi so. Enti wɔrenni mogya da, na wɔyare nso a, wɔrennye mogya. * Nanso sɛ ɔkwan foforo bi wɔ hɔ a wobetumi afa so asa wɔn yare de agye wɔn nkwa a, wogye tom. Wɔgye di sɛ Ɔbɔadeɛ a ɔbɔɔ nkwa ne mogya no nim nea eye ma wɔn. Wo nso wugye di sɛ onim nea eye ma wo anaa?
ADE BAAKO A YEHOWA MAA WƆDE MOGYA YƐE
17. Dɛn na Yehowa penee so sɛ Israelfo betumi de mogya ayɛ?
17 Onyankopɔn nam Mose so maa Israelfo mmara sɛ: “Ɔhonam biara kra wɔ mogya mu, na afɔremuka no so na mede ama mo sɛ momfa mpata mma mo kra, na mogya na wɔde pata ma bɔne.” (Leviticus 17:11) Sɛ Israelfo no yɛ bɔne a, na wotumi de aboa kɔ asɔrefie ma asɔfo no kum no. Afei wohwie ne mogya no bi gu afɔremuka no so. Ɛno na na wɔde srɛ Yehowa hɔ bɔne fafiri ma wɔn. Wei nko ara ne ade a Yehowa maa Israelfo no de mogya yɛe.
18. Anidaso bɛn na Yesu afɔrebɔ no ama yɛanya?
18 Bere a Yesu baa asase so no, ɔde ne nkwa anaa ne mogya mae. Ɔde besii mmoa a na Israelfo de bɔ afɔre no ananmu sɛnea ɛbɛyɛ a yebenya bɔne fafiri. (Mateo 20:28; Hebrifo 10:1) Yesu nkwa som bo paa ma enti bere a Yehowa nyanee no kɔɔ soro no, afei de na kwan abue sɛ obiara a ɔpɛ betumi atena ase daa.—Yohane 3:16; Hebrifo 9:11, 12; 1 Petro 1:18, 19.
Dɛn na wobɛyɛ de akyerɛ sɛ wontoto nkwa ne mogya ase?
19. Dɛn na yɛbɛyɛ na yɛn ‘ho afi nnipa nyinaa mogya ho’?
19 Yɛn ani sɔ nkwa a Yehowa de akyɛ yɛn no! Yɛpɛ sɛ yɛka ma obiara te sɛ, sɛ wonya Yesu mu gyidi a, wobetumi atena ase daa. Yɛdɔ nnipa, enti yɛbɛyɛ nea yebetumi biara ama wɔahu nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ na wɔanya nkwa. (Hesekiel 3:17-21) Yɛyɛ saa a, yebetumi aka asɛm a ɔsomafo Paulo kae no bi. Ɔkae sɛ: “Me ho afi wɔ nnipa nyinaa mogya ho, efisɛ mamfa Onyankopɔn agyinatu biara ankame mo.” (Asomafo Nnwuma 20:26, 27) Nokwasɛm ne sɛ, sɛ yɛka Yehowa ho asɛm kyerɛ nkurɔfo, na yɛma wohu sɛnea nkwa som bo ma no no a, na yɛrekyerɛ sɛ yɛn nso yɛwɔ obu ma nkwa ne mogya.
^ nky. 16 Sɛ wopɛ sɛ wuhu ayaresa a mogyasɛm biara nnim ho asɛm a, hwɛ nhoma a wɔato din “Momfa Mo Ho Nsie Onyankopɔn Dɔ Mu,” kratafa 77-79. Ɛyɛ Yehowa Adansefo nhoma.
NOKWASƐM 1: NKWA YƐ AKYƐDE A ƐNSƐ SƐ WOTOTO NO ASE
“Wo nkyɛn na nkwa nsuti wɔ.”​—Dwom 36:9
Dɛn na yɛyɛ de kyerɛ sɛ yebu nkwa?
Asomafo Nnwuma 17:28; Adiyisɛm 4:11
Yehowa akyɛ yɛn nkwa, enti ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ ho anisɔ.
Obi di awu a, wayɛ bɔne. Otu nyinsɛn gu nso a, wayɛ bɔne.
2 Korintofo 7:1
Twe wo ho fi nneyɛe bi te sɛ tawanom ne nnubɔne ho.
Agodi ne anigyede biara a basabasayɛ wom no, twe wo ho fi ho.
NOKWASƐM 2: MOGYA NE NKWA
“Ɔhonam biara kra ne ne mogya, efisɛ ɔkra wɔ mogya no mu.”​—Leviticus 17:14
Onyankopɔn bu nkwa ne mogya sɛn?
Mogya gyina hɔ ma nkwa.
Yetumi di aboa nam nanso ne mogya deɛ, ɛnsɛ sɛ yedi.
Asomafo Nnwuma 15:28, 29; 21:25
Onyankopɔn ka sɛ ɛnsɛ sɛ yedi mogya a, ɛkyerɛ sɛ yɛyare a, ɛnsɛ sɛ yegye mogya.
Yɛne Yehowa ayɔnkofa ho hia yɛn sen biribiara.
NOKWASƐM 3: ADE BAAKO A YEHOWA MAA WƆDE MOGYA YƐE
“Yesu mogya hohoro yɛn ho fi bɔne nyinaa ho.”​—1 Yohane 1:7
Anidaso bɛn na Yesu afɔrebɔ no ama yɛanya?
Israelfo bere so no, wɔyɛ bɔne a, na wotumi de aboa kɔ asɔrefie ma asɔfo no kum no. Afei wohwie ne mogya no bi gu afɔremuka no so. Ɛno na na wɔde srɛ Yehowa hɔ bɔne fafiri ma wɔn.
Mateo 20:28; Hebrifo 9:11-14
Bere a Yesu baa asase so no, ɔde ne nkwa anaa ne mogya mae. Ɔde besii mmoa a na Israelfo de bɔ afɔre no ananmu sɛnea ɛbɛyɛ a yebenya bɔne fafiri.
Yesu nkwa som bo paa ma enti bere a Yehowa nyanee no kɔɔ soro no, afei de na kwan abue sɛ obiara a obenya Yesu mu gyidi no betumi atena ase daa.